IZiko loNyango lweProton ProCure-Unyango lweProton eNew Jersey
IiSeshini zoLwazi saSimahla
Kutheni le nto kufuneka uqinisekise
Iqela lakho lokukhathalela
Imidiya kunye neendaba
Isebenza njani i-Proton Therapy
Yintoni unyango lweProton?
I-Proton Therapy FAQs
Intloko kunye neNtloko iiTumors
Iipumors ecaleni kweSpine
Jonga iZiko lethu
Ukucwangcisa utyelelo lwakho
Ngoku sinikezela ngokubonisana kwangoko kunye nokundwendwela okulandelayo. Cofa apha ukufunda okungakumbi okanye ukuhlela abonisane.
Ubomi Bakho Buvuselelekile
Thatha injongo yomhlaza wakho kunye nonyango lweProton kwiProCure
Fumana impendulo yakho Apha
Fumanisa umohluko weProCure
Elona ziko lide le-proton lide lasekwa kwindawo ye-Tri-state
Iziko lokuqala elitsha kunye neNew York kuphela ngePensile Beam Scanning
Ngaphezulu kwe-5,000 yezigulana ezinyangiweyo ukusuka ngo-2012
Elona qela elinamava kakhulu lonyango lweproton
YENZA IXESHA ELIQINISEKILEYO LOKUKWAKHO KWAKHO
Jonga ngaphakathi kwiziko lethu lobugcisa kwaye ufunde ngakumbi ngumahluko we-ProCure.
UKUGCINWA KWEXESHA LOKUGQIBELA, IZIPHUMO ZESIVUZO
Esebenzayo, elawulwayo, kwaye echanekileyo, I-Proton Therapy yenye yeendlela eziphambili zonyango lomhlaza wemitha. Ngokuchaneka kokucaca, unyango lwe-proton luhambisa imitha ngqo kwisibeleko kwaye luyekile, ukunciphisa ukubonakaliswa kwemitha kwimisipha enempilo ejikelezileyo kunye nokunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga.
NGABA PROTON THERAPY REL TO AM?
I-Proton Therapy iyasebenza ekunyangeni iintlobo ezininzi zomhlaza kunye nesisu. Ukuchaneka kwayo okufana ne-laser kwenza ukuba lube lolona nyango lufanelekileyo kwezona meko zinzima, kubandakanya amathumba abunjwe ngokungaqhelekanga, amathumba ezingane, kunye namathumba abekwe kufutshane namalungu abalulekileyo.
Jonga amabali Amandla kunye nenkuthazo evela kuluntu lwethu.
I-Meningioma Brain Tumor
Zimasa iseshoni yoLwazi
Funda ngakumbi malunga nonyango lweproton kunye neqela lethu lokukhathalela elikumgangatho wehlabathi. Sijoyine kwiseshoni yolwazi kwiziko lethu le-state-of-the-art. Nxibelelana neziko ukuze ugcine indawo yakho namhlanje.
Iqela lethu lokukhathalela oochwephesha aliboneleli kuphela kunyango lomhlaza, kodwa lihambisa ezona zinto zilungele impilo yakho iyonke. Ogqirha bethu baqeqeshe kumanye amaziko adumileyo kwihlabathi, kubandakanya iHarvard Medical School, MD Anderson kunye neYunivesithi yasePennsylvania abanamava aphambili kwezonyango. Ukusuka kwi-oncologist yethu ekhokelayo ukuya kubahlengikazi bethu be-oncology kunye nabasebenzi benkxaso, iqela lethu lonke lizibophezele ekuboneleleni ngokushushu nangokwamkela indawo engqongileyo yokomeleza impilo yakho.
UKUNYANGWA KOMHLAZA WESIBHEDLELE NGONYANGO LWEPROTON
Ngobunzululwazi obunqamlezileyo bonyango lweproton, oogqirha banokujolisa ngqo kwisisu ngelixa benciphisa ukonakala kwezicubu kunye namalungu asempilweni. Ngokungafaniyo nokusasazeka kwemitha ye-X-ray kubandakanya iCyberknife, exhomekeke kwiifotoni ukufikelela kwiiseli zomhlaza, iiproton zifaka imitha yazo ngokuthe ngqo kwi-tumor kwaye ziyeke.
Cela ukubonisana malunga nonyango lweCroton Therapy Cancer
Ukuze ufunde ngakumbi malunga nonyango lweproton okanye ucwangcise ixesha lokudibana, nceda ugcwalise le fomu ingezantsi kwaye umntu uza kunxibelelana nawe ukuba aphendule imibuzo yakho.
ImithaUkukhutshwa kwemitha kunconyiweImitha ayikhuthazwanga
Isifo *Ndifumene umhlazaKhange ndifumaneke ndinomhlaza
Ingaba uve ngathi?Iqela lenkxasoBillboardInkcazo-mali ngoluntu okanye umsithoIsigulana sangaphambili okanye esikhoyoUmhlobo okanye iLungu losaphoUkuthumela i-InshurensiInternetIphepha lephephandabaomnyeUkuthumela kugqirhaukuzithengela WebsiteunomathotholoFunda iNqaku lephephandaba, iMagaziniImidiya yokuncokolaIntengiso yeTVIindaba zeTVyokuzonwabisa
Inzuzo yonyango lweProton
Apho imisebe ye-X-ray esemgangathweni ikhupha i-radiation ukusuka ngelo xesha ingena kulusu lonke ukuya kwelinye icala lesisu, unyango lwe-proton lubeka imitha ngqo kwisibeleko ngaphandle kokuphuma ngokujikeleza impilo.
I-ProCure isebenzisana nezibhedlele eziphambili kwilizwe kunye ne-radiation oncology ukuzisa unyango lwe-proton kwizigulana. Zethu imibutho yezonyango ziquka iSikhumbuzo Sloan Ketching, Ntaba yeSinayi, iMontefiore, i-NYU, kunye neMpilo yaseNyakatho.
Fumanisa ukuba ngaba unyango lwe-proton lonyango olulungileyo na kuwe. Nxibelelana neQela lethu lokuKhathalela okanye ucele ulwazi oluninzi kwi-Intanethi.
Ipensile Beam Scanning Proton Therapy
Izibonelelo zeProton Therapy vs. Imitha esemgangathweni
Kutheni iProton Therapy
Isebenza njani i-Proton Therapy?
Oogqirha kunye nabasebenzi
Iindleko kunye nokuBambisa
I-103 Cedar Grove Indlela eyiNdlela
Somerset, eNew Jersey 08873
Ulwazi ngezigulana ezitsha: (877) 967-7628
Ikliniki: (732) 357-2623
Ukucwangcisa Unyango: (732) 357-2654
Iiyure zomsebenzi 8:00 am - 5.00 pm EST
© 2019 ProCure IProton yeZiko loNyango. Onke Amalungelo Agciniwe. Iwebhusayithi yeProCure, kubandakanya imixholo kunye neenkqubo zayo, ibonelelwa ngolwazi kunye nemfundo kuphela. Ayenzelwanga njengengcebiso yezonyango, kwaye ayenzelwanga ukudala naluphi na ugqirha-isiguli okanye ubudlelwane bezonyango. Olu lwazi alungeni endaweni yokubonisana nomboneleli wakho wezempilo. Izimvo kunye nezimvo ezivezwe kule webhusayithi azibonisi ezo zeProCure. I-ProCure izimisele ukubonelela ngewebhusayithi evulekileyo kubo bonke abaphulaphuli. Ukuncedisa kule nzame, isixhobo esiguqulelayo kulwimi siyafumaneka. I-ProCure ayinaxanduva kuguqulelo olusuka kwisiNgesi olunokuthi luthathwe njengengalunganga okanye lilahlekisayo. Nceda unxibelelane nathi ngqo okanye ugqirha wakho ukuze ulungiselele ukuba utolike. Ngokusebenzisa le webhusayithi, wamkela imiMiselo yokuSetyenziswa. Nceda ufunde ingxelo yethu yabucala.
Uyilo lwewebhusayithi kunye nophuhliso lwe I-Prager Creative
Nxibelelana neqela lethu lokhathalelo kwa (877) 967-7628